Glovo, gamuchira zvaunoda chero kwaunoda | IPhone nhau
Glovo, gamuchira zvaunoda chero kwaunoda
Kana ndichifanira kutaura chokwadi, pandakaziva nezve kuvapo kwe Glovo Ndakafunga, "Imwe yekutengesa app?" Iniwo ndinofanira kuva akatendeseka kana ndikati kufunga kuti ini ndanga ndangoona akati wandei maficha ekushandisa uye ndanga ndarangarira imwe ine mukurumbira, asi haina kana chekuita nazvo. Asi ngatitangei pakutanga: Chii chinonzi Glovo? Ini ndinofunga kuti kuti titsanangure sevhisi iyi tinofanirwa kuenzanisa kana kusanganisa vamwe vatinoziva.
Ini ndinotenga zvakawanda kuAmazon, chitoro chepamhepo (kwandiri chakanakira zvikonzero zvakawanda) kwandinowana chero chinhu. Kune rimwe divi, dzimwe nguva ini ndinodawo kuodha pizza, yandinofanira chete tora foni, fona uye mirira nokushivirira yemurume ane hushamwari wekusvitsa murume kuti aendese chisvusvuro changu pasuo rangu. Ungati chii kwandiri kana ndikakuudza kuti Glovo inobatanidza zvinhu zviviri zviri mushumiro imwe chete? Zvingave zvakanaka, handiti?
1 Kumbira chero chinhu uye Glovo inokuendesa iwe kwaunoratidza
2 Glovo nhare mbozha
Kumbira chero chinhu uye Glovo inokuendesa iwe kwaunoratidza
Ini handina zvichemo nezvitoro zvepamhepo asi, mune akanakisa kesi uye ndiri premium, ndinofanira kumirira maawa makumi maviri nemana kuti ndiwane odha yangu. Ko kana izvo zvino mamiriro ekunze akanaka ave kusvika, chandinoda ndezvimwe magirazi ezuva kuenda kugungwa? Kana swimsuit? Zvakanaka, ndicho chikonzero chaicho chekuvapo kwaGlovo: kutora zvese zvatinoda kunzvimbo yatinozviratidza, izvo zvinogona kuve zvakanaka kune vane usimbe seni kana zvinogona kutiburitsa mukukurumidza umo tisingakwanise kuenda kuchitoro kutenga nekuti isu tine chimwe chinhu chakakosha kuita. Uye chii chiri nani, kuendesa kwacho kuri kukurumidza uye vanotivimbisa izvozvo tichava nazvo zvatakaraira muawa, sekureba sekuraira kwacho kuri chinhu chinogona kutariswa senguva dzose.
Tinogona kuita chero chikumbiro kunharaunda yeGlovo kubva yavo webhusaiti kana kushandisa yavo mbozhanhare application (iwe unenge uine chinongedzo pakupera kweichi posvo). Dambudziko razvino, chimwe chinhu chakashata chaifanira kuve nacho, ndechekuti ndizvo chete inowanikwa mumaguta mana: Milan, Barcelona, ​​Madrid neValencia. Iwe unogona kutiziva zvishoma, asi isu tinofanirwa kuyeuka kuti tiri kutaura nezvekambani iyo isati yave negore nehafu yehupenyu. Kuhwina mibairo senge mubairo we startups ye mobile mobile kubva kuGoogle kana AppCircus Barcelona, ​​chinhu chega chatinogona kufunga nezvacho ndechekuti ivo vacharamba vachikura nekupa sevhisi kune mamwe maguta. Ndiani anoziva, pamwe vachasiyawo maguta uye votanga kusvika kumaguta mune ramangwana.
Panguva ino unogona kunge uchishamisika kuti sei ndataura nezve "nharaunda yeGlovo." Chikonzero ndechekuti sevhisi inofambiswa nezvavanodaidza Glovers kana vanunuri vanozvipira. Ini ndinofunga havangandinyengetedze kuti ndiite zvekuendesa (ndinosarudza kuve kune rimwe divi), asi ipfungwa yaida kujekeswa.
Glovo nhare mbozha
Kubva pakuona kwangu, iyo Glovo mobile application haigone kuve yakawanda yakapusa uye inonzwisisika. Mushure mekunyoreswa kunyoreswa, kwatinofanira kupa yedu nhamba yefoni (yekuchengeteka, hongu), tichaona zvaunazvo mune zvakapfuura zvakatorwa Tinogona kuhodha chigadzirwa kubva kune chimwe chezvitoro zvishanu zvikuru: zvinwiwa, zvigadzirwa zvemagetsi, chikafu, super (musika) uye chemishonga. Isu zvakare tine mukana wekutumira chimwe chinhu isu pachedu kana kubata pane rakakura bhatani riri mukati kuodha chigadzirwa chisingawanzo kujairika.
Kana izvo zvatinosarudza chiri chigadzirwa chevashanu zvakajairika, iko kunyorera kuchatipa nhevedzano yesarudzo, senge croissant kana pie yeapuro mune chikafu. Kana kodhi rangoiswa, chero zvayakaita, tichazoziva kana iko kuendesa kuri kwemahara zvachose kana kune mutengo. Pawebhusaiti yavo ivo vanoyambira kuti iyo kutumira kunogona kuita € 4.90 kuwedzerwa kumutengo wekutenga wechigadzirwa, kana paine chakagadzirwa.
Kutikurudzira kuyedza sevhisi, Glovo inopa vashandisi vatsva kodhi yekusimudzira ye € 5 iyo yatinogona kununura kubva kunyorera. Kuti tiite izvi, isu tichafanirwa kupinda inoenderana chikamu uye nekuisa iyo kodhi NICETOGLOVEYOU.
Kana iwe wakaita seni uye uchida kuraira chero chinhu, mirira kuti vaende nacho kumba uye iwe unogara mune imwe yenzvimbo dzakatsigirwa, ndinofunga uchada Glovo. Uye ndosaka tichiitira zvinhu isu pachedu kana iwe uchigona kuodha imwe?
Glovo - Bvunza izvo zvaunodavakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Glovo, gamuchira zvaunoda chero kwaunoda
Joer, tiri kuwedzera zuva nezuva. Panzvimbo pekugadzira maficha eiyo nyowani uye kufambira mberi kwepasi, nzanga uye hupenyu, vanhu vanongoziva maitiro ekugadzira zviitwa zvekuita kuti pasire pasire pese kuve nehusimbe, husimbe, kugara zvakanyanya, kupfuma zvakanyanya, zvinomera ... nyika ine maonero asingakundike echinhu chinonzi "utsva" uye "budiriro." …. 🙁
Ndinoda kuziva kuti vanhu vangani vangabhadhara mamirioni kuti vasatombobva pasofa (kunyangwe kana vachikwanisa kuzviita pasina matambudziko) uye kuti zviitwe zvese, asi kwete zvekuzviita, asi kwete zvekusimuka kubva pasofa. zvinoshamisa, uye panguva imwechete ichokwadi.
Qualcomm inopa Apple uye inoratidza kuti iyo iPhone 7 inoshandisa Intel modem